Banyere Anyị - Shanghai Pamaens Technology Co., Ltd
Shanghai PAMAENS Technology CO., LTD, specializes ke R & D, mmepụta na ahịa nke ike na-azọpụta kpo oku na mkpuchi na ngwaahịa. PAMAENS enye echichi, ọzụzụ na mgbe-ire onye-nkwụsị ọrụ. PAMAENS aghọwo onye ndú na ubi nke ngwa maka ulo oru ike na-azọpụta kpo oku technology na China na ná mba ọzọ.
The mkpuchi Jaketị, tank & drum kpo oku Jaketị na infrared heaters anyị mepụtara bụghị naanị ukwuu belata oriri ike, site na-amụba thermal arụmọrụ, rụọ àgwà nke ngwaahịa na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi. Ke adianade do, anyị na ngwaahịa ndị mma ojiji, enyi na enyi na gburugburu ebe obibi, mfe iji wụnye na ogologo ojiji ndụ, mma ma a pụrụ ịdabere na arụmọrụ. Anyị mkpuchi Jaketị & blanket na-n'ọtụtụ ebe na valves, flanges, ọkpọkọ, plastic igwe, dryers, exchangers, iyuzucha usoro wdg Drum & tank heaters na-eji ikpo nile di iche iche nke liquids ndị dị ka mmiri, chemical ihe, mmanụ aṅụ, mmanụ, mama wdg
Heating ọcha, dị ka katrij okpomọkụ, eriri igwe okpomọkụ, tubular okpomọkụ, seramiiki gbalaga okpomọkụ, mica gbalaga okpomọkụ, igba-na okpomọkụ, ikuku mma okpomọkụ na mmiri mma gbalaga heaters, nke a pụrụ iji mee na cylinder kpo oku nile di iche iche nke plastic ígwè, tinyere extrusion, ọgwụ na ịkpụzi igwe, waya ịbịaru igwe, pelletize, fụọ filming igwe, plastic imegharị ihe maka iji na vulcanizing igwe, wdg Dabere elu itinye n'ọkwa kpo oku technology na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na mmepụta nke omenala heaters, anyị nwere obi ike na-enye elu àgwà na ezi price itinye n'ọkwa heaters, ya na ndị magburu onwe tupu sales ọzụzụ na mgbe ahịa ọrụ.
Ugbu a, anyị nwere ọtụtụ ndị dọkịta, nke nna ukwu ma agadi engineer, ndị na-raara nye R & D na akpa technology. Ke adianade do, PAMAENS akwado kọleji na mahadum na China. Na miri nghọta nke a dịgasị iche iche nke n'ibu ubi, PAMAENS bụ kwara emepe itinye n'ọkwa heaters maka dị iche iche ngwa
PAMAENS nwere mmụọ nke eziokwu, oké ọchịchọ, arụmọrụ na mma. Anyị na-ike na-azọpụta bụghị nanị dị ka a ọrụ ma a-elekọta mmadụ ọrụ na-alaghachi anyị motherland. Ezi obi ekele gị niile na-atụ anya na-akwado ụlọ ọrụ na China na ná mba ọzọ na ike a Synergy maka mma nkịtị ga-eme n'ọdịnihu ọnụ.
PAMAENS kpatarari ISO9001 OA na RoHS asambodo. Ọ na-emetụta ike ule na-achịkwa ọ bụla otu akụkụ nke ngwaahịa nakwa dị ka ọ bụla nhazi nzọụkwụ. PAMAENS e ikike ihe na mbupụ rights.The ngwaahịa na-ere ka Europe, Middle East, South Eastern Asian, Australia, US, Taiwan wdg Anyị na-agba mbọ na-enye:
Free ọzụzụ nke echichi na mmezi
OEM na imewe ọrụ